QM “Waxaan murugada la qeybsanaynaa qoysaska dadkii naftooda ku waayay qaraxii 14-kii Oktoobar” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA QM “Waxaan murugada la qeybsanaynaa qoysaska dadkii naftooda ku waayay qaraxii 14-kii...
“Bahda Qaramada Midoobay, oo la jirta dadka Soomaaliyeed, waxay diiradda saaraysaa mustaqbalka iyo in la sii wado amba-qaadista horumarka ku aaddan nabadda, dowlad wanaagga, iyo barwaaqo ku-soo-dabbaalidda [dalka]”. Horumarkii lagu tallaabsaday laga soo billaabo 2017kii wuxuu ka turjumayaa adkeysiga dadka Soomaaliyeed iyo rabitaankooda ku aaddan mustaqbal wanaagsan inkastoo ay jirto dhibaatada xagjirnimada gacan-ka-hadalka leh.
Si kastaba ha ahaatee, arxan-darradii waxuushnimada ahayd ee weerarkii 14kii Oktoobar 2017-kii lama iloobin, waxaana murugada la qaybsanaynaa qoysaska dadkii naftooda ku waayay, iyo sidoo kale dadkii ka badbaaday,” ayuu yiri Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya, James Swan.
Weerarka waxaa ku dhintay ugu yaraan 587 qof wuxuuna ahaa weerarkii argagaxiso ee ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca Afrika oo loo adeegsaday walxaha qarxa ee macmalka ah (IEDs). Bololaal kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa
Previous articleAmniga Jowhar oo la adkeeyay xilli lagu jiro ololaha doorashooyinka Hirshabeelle.
Next articleMareykanka“Weli waxaan la murugooneynaa dhibaatadii uu geystay qaraxii Soobe.
Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya oo beeniyay in dad shacab ah lagu laayay gobalka Tigray.
Isbitaalka Magaalada Mekelle ee dalka Itoobiya oo daawooyinka ay ka sii dhamaanayaan Xilli dad faro badan oo dhaawac la keenayo wali.
Madaxweynaha Itoobiya oo Maanta lagu soo dhaweeyay Dalka Jabuuti+(SAWIRRO).